एक प्रतिभाशाली अभिनेता - एक प्रतिभाशाली छोरी। Dzhonni Depp र Lili Rouz Depp
Dzhonni छोरी Deppa लिली आफ्नो अठार वर्ष पहिले नै एकदम स्वतन्त्र र प्रमुख मिडिया व्यक्ति भएको छ। त्यो, चलचित्रमा देखा उनको फोटो पत्रिका को कवर सजाउनु यसलाई सक्रिय सार्वजनिक जीवनमा संलग्न छ।
यो क्यारेबियन को मुख्य समुद्री डाकू एक सुन्दर छोरी छ भन्ने कुनै गोप्य छ। Dzhonni Depp परिवर्तनको जवान र प्रतिभाशाली बढ्दो पुस्ता गर्व हुन सक्छ। जसको नाम केटी, जस्तै पूर्ण लिली-गुलाब मेलोडी Depp विश्व फैशन को राजधानी मा 1999 को वसन्त मा जन्म भएको थियो सुनिन्छ - पेरिस। त्यो फ्रान्सेली नागरिकता छ, तर जीवन र यसलाई दुई देशहरूमा काम गर्दछ - संयुक्त राज्य अमेरिका र फ्रान्स। लिली गरेको आमा र बुबा दुवै देशहरुमा ठूलो नाम हुन्। उनको आमा - एक फ्रान्सेली-जन्म अभिनेत्री र गायक को unmistakable आवाज कोमल Vanessa प्याराडाइज, र आफ्नो पिता संग - संसार सेलिब्रिटी र प्रसिद्ध हलिउड अभिनेता Dzhonni Depp।
जोडे अझै पनि एक छोरा ज्याक छन्, आफ्नो पूरा नाम ज्याक Dzhon Kristofer Depp तेस्रो हो, उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिका मा 2002 मा जन्म भएको थियो, र आमाबाबुको छाया मा रहन प्रयास गर्दा, कि, यो त छैन गरिरहेको, आफ्नो छोरी जस्तै छ।
Dzhonni Depp - धेरै मायालु र मायालु बुबा जवान starlet गर्न परिवार छोडेर पछि पनि एम्बर सुना उहाँले बच्चाहरु संग कुराकानी गर्न र तिनीहरूको शिक्षा मा संलग्न जारी राखे। र हुनत बच्चाहरु एम्बर साथ प्राप्त भएन, तिनीहरू अझै पनि अक्सर आफ्नो बुबाको कम्पनी मा देख्न र त्यहाँ Hurd Depp आक्रमण र ब्याट्री आरोप जसमा एक घोटाले हुँदा Lili Rouz, ज्याक र पनि पूर्व नागरिक पत्नी Vanessa प्याराडाइज यसलाई संरक्षण, जनी रहयो ।
हलिउड मा - बच्चैदेखि लिली उनको आमाको पेसा फ्रान्स र पोप विकास रूपमा, सडक प्रयोग भयो। तसर्थ, परिवार प्याराडाइज-Depp निरन्तर युरोप र अमेरिका बीच plied। उनको आमाबाबुले दर्ता विवाह चौध वर्ष albeit, सुखी बस्थे। हलीवुड "फेम को वाल्क" र एक छोरी एक तारा - 1999 लिली पिता यस वर्ष मा, त्यो धेरै दुई रूपमा उपहार प्राप्त रूपमा, धेरै फलदायी छ थियो। Dzhonni Depp र Vanessa प्याराडाइज छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा र पालनपोषण दिनुभयो। सबै पछि, आमाबाबु, Lili Rouz र जैक, stardom वा अहङ्कारको कुनै सङ्केत को धन र प्रसिद्धि बावजुद।
लोकप्रियता Dzhonni Deppa छोरी, अब प्रसिद्ध आमाबाबुको फोटो भन्दा बढी अक्सर फोटो चमक आवरण सजाउनु जो, बिस्तारै जित्यो। त्यो मा फेशन मोडेल रूपमा काम गर्न थाले कार्ल Lagerfeld। अनुभवी Couturier को नाजुक, कांप सौन्दर्य Lili Rouz संग प्रसन्न। यस सिनेमा मा उनको पहिलो उपस्थिति हरर फिल्म "हात्तीको दात", त्यो एक भर्नको संग एक केटी रूपमा एउटा सानो आवर्ती भूमिका थियो जसमा भनिएको गर्न सकिन्छ। तर लिली आफ्नो प्रतिभा देखाउन सक्षम थियो र फिलिम उनको टिप्पणी गरे।
यो सांगीतिक जीवनी नाटक "डान्सर" र जहाँ उनले नैनाले Portman, निर्देशक Rebecca Zlotovski संग फिलिम मा स्वतन्त्र समन्वित सहभागिता जवान प्रतिभा निमन्त्रणा गरिएको थियो कल्पना "तारा", को तत्व संग गुप्तचर melodrama मा, कमेडी रोमाञ्चक "Yoganutye" शूटिंग पछि थियो। एक जवान केटी को लागि एक क्यारियर सुरु गर्न धेरै राम्रो ठाउँ। र अब पनि लिली शास्त्रीय स्वाद घर "Chanel" को अनुहार आमा बाट ब्याटन भन्दा लिइरहेको छ। Vanessa प्याराडाइज लामो ब्रान्ड "Chanel" र आफ्नो स्वाद प्रतिनिधित्व छ।
यो वर्ष, Lili Rouz Depp एक वयस्क बन्नेछ। सायद यो सार्वजनिक जवान देखि ढाकछोप गर्न भएनन् छ कि यस कारण लागि हो। तिनीहरूलाई आठ वर्ष, पहिले नै छोडपत्र को आफ्नो प्रेमिका र एक सानो केटी को पिता भन्दा पुरानो छ जो एक पेशेवर पुरुष मोडेल र मोडेल Staymest ऐश छ। तथापि, लिली आफु र उनको आमा यो वास्तवमा चिन्ता छैन, र तिनीहरूले अक्सर पसलहरूमा साथ हिंड्न। कुनै पनि बाबु आफ्नो छोरी चिन्ता थियो, Dzhonni Depp छैन एक अपवाद, सायद, त्यो व्यक्तिगत Lili Rouz को सज्जन थाह गर्ने छैन मात्र परिवार छ किन छ।
पौडीबाज व्लादिमीर Morozov: जीवन, व्यक्तिगत जीवन, खेल क्यारियर
समूह IOWA: को soloist को जीवनी र क्यारियर
ब्राजिलियन अभिनेत्री Brito Stefani: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
माइकल Ryabko, "प्रणाली": विवरण, विशेषताहरु र रोचक तथ्य
फोटो, व्यक्तिगत जीवन र जीवनी Otar Kushanashvili
ओम्स्क कवि दिमित्री Rumyantsev: जीवनी, रचनात्मकता र रोचक तथ्य
चिकन र मकै संग एक सरल सलाद
तिनीहरूले नै चरा हो किनभने किन कुखुरा उड छैन, गरे?
मूल्य र 1853-1856 को क्राइमन युद्ध को कारण
Viktor Stepanov जीवनी र अभिनेता को Filmography
अर्जेन्टिना गरेको जलवायु के हो?
"तपाईं को सबै को लागि धन्यवाद": अभिनेताहरु दर्शक राम्रो कथा दिनुभयो
प्रमुख सम्झौता - तपाईं विचार गर्न आवश्यक छ?
फ्रंट फ्लेट रैक: प्राविधिक विशिष्टताहरू
सामाजिक मिलाइएको - नयाँ जीवन प्रथम grader गर्न समायोजन को एक प्रक्रिया
दाल को शाकाहारी सूप: फोटो संग एक नुस्खा
Flashmob के हो?
Jellied माछा - भोजन प्राथमिकता